Xaalada Dhuusa Mareeb oo degan iyo Ahlusuna oo ka hadashay dagaalka – STAR FM SOMALIA
Xaalada magaalada Dhuusa Mareeb ayaa ah mid degan, kadib dagaal saacado badan qaatay oo ka dhacay xaafadaha magaalada, iyadoo Ahlusuna ay sheegtay inay gacanta ku dhigeen Sarkaalkii horay uga soogoostay Milateriga Soomaaliya ee ku biiray Ahlusuna.
In ka badan 10-ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalka, halka tiro intaa ka badan ku dhaawacmeen, kuwaasoo ahaa labada dhinac ee dagaalamay.
Dagaalka ayaa saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan magaalada, iyadoo dad fara badan ay ka qaxeen, markii xalay uu dagaalku bilowday.
Mursal Maxamed Xeefow oo ka mid ah saraakiisha Ahlusuna ayaa sheegay in dagaalka uu sababay khasaare fara badan, isagoo xusay inay 27 ruux ka dileen dhinacii kale ee ay la dagaalamayeen.
Waxaa uu sheegay inay si buuxda gacanta ugu hayaan Dhuusa Mareeb, ayna dhinacii kale ka qabsadeen hub.
Dagaalkii ayaa la sheegay inay qeyb ka ahaayeen Ciidamo taabacsan Galmudug, waxaana labada dhinac isku hor fadhiyaan duleedka magaalada, halkaasoo ay xiisad ka jirto.